Homeसमाचारआज शक्तिशाली हुरीबताससहित वर्षा हुने, सतर्क रहन आग्रह
केही समययता नेपालको मौसम बिग्रँदै गएको छ । भारतको विहार र पश्चिम बंगालमा बनेको न्यूनचापीय क्षेत्र तथा पश्चिमी र स्थानीय वायुको प्रभावले नेपालमा हुरीबताससहित वर्षा हुँदै आएको छ ।
यसपटक अन्य वर्षको तुलनामा धेरै असिना पानी, चट्याङ र हुरी चलेको छ । बुधबार साँझ देशभर शक्तिशाली हुरीबतास चलेको थियो । उपत्यकासहित मध्य क्षेत्रको केही ठाउँमा आज बेलुकीतिर हुरीबतास चल्ने मौसमविद्ले अनुमान गरेका छन् ।
बिहीबार देशका केही ठाउँमा मेघगर्जन र हुरीबताससहित पानी पर्ने सञ्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । देशका केही ठाउँमा असिना पनि पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
बंगालको खाडीको दक्षिण पूर्वी भागमा रहेको शक्तिशाली चक्रवात फानीको प्रभावले बिहीबार दिउँसोपछि पूर्वी र मध्य क्षेत्रको हिमाली भेगमा भारी हिमपातसहित हुरीबतास चल्ने भएकाले सावधानी अपनाउन मौसमविद्ले आग्रह गरेका छन् ।
आज शक्तिशाली हुरीबताससहित वर्षा हुने
सिउँदो रंगाउन नपाउदै भीमको प्रेम दैवले खोस्यो
नेपालमा पहिलो पटक बर्ड फ्लूबाट एक जनाको मृत्यु, कसरि सर्छ बर्ड फ्लू ? यसरि हुनुहोस् सचेत !
April 17, 2019 Spnews समाचार Comments Off on अबको तीन दिनसम्म मौसम खराब हुने, सतर्क रहन आग्रह